आजको राशिफल (मंगलबार र बुधवार)- हरिप्रसाद भण्डारी
सम्पर्क मो. नं. – ९८४२२१९७३५
आजको राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ १७ गते मंगलबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०३ तारिख,
वि.सं. २०७६ भदौ १७ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०३ तारिख, भाद्र शुक्ल पक्ष चौथी तिथी बिहान ०६ बजेर ५७ मिनेट सम्म त्यसपछि पञ्चमी तिथी। चित्रा नक्षत्र, चन्द्रमा तुला राशिमा। शुभ योग, बालव करण। सुर्याेदय बिहान ०५ः४४ र सुर्यास्त साँझ ०६ ः२० मा हुनेछ। आज जन्म लिने वच्चाको राशि तुला हुन्छ।
आजको चाडपर्र्व मंगलचौथी व्रत, ऋषिपञ्चमी व्रत, सप्तर्षि पुजा रहेको छ। भोली सुर्य षष्ठि रहेको छ।
लाभ वेला बिहान १० ः११ देखि ११ ः४१ मिनेट सम्म, अमृत वेला बिहान ११ ः४२ देखि ०१ ः१२ सम्म शुभ वेला दिउँसो ०२ः४३ देखि ०४ ः१३ सम्म रहेका छन।
काल वेला बिहान ०५ ः५८ देखि ०६ः१४ सम्म र रोग वेला बिहान ०१ः१६ देखि ०२ ः ४४ सम्म रहेका छन।
आज सक्खर वा गुँड खाएर र भोली तिल वा धनिया मुखमा राखेर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुनेछ। यो पञ्चाङ्ग नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित गणना हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्र र राशिमा पनि समय अन्तर हुनेछ । हजुर जुन देशमा भएपनि आफ्नो स्थानीय समय लाई आधार मानी हेर्नुहोला।
आज तपाईको सप्तम भावमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । नसोचेका कामहरू सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । पराक्रम बढ्नुका साथै शरीर फुर्तिलो रहने छ । साझेदारी वा पार्टनरसीपमा कुनै काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यसका लागि आज अनुकूल छ । घरायसी सुखका वस्तुको किनमेल हुनसक्छ । घरपरिवारमा हर्षको वातावरण हुनेछ । आनन्द र रमाईलो का लागि समय र धन खर्च हुनसक्छ । व्यवसाय र पेसाबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आफन्तका बीचमा आत्मीयता बढ्ने छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग हलुका रातो, शुभअङ्क ७, शुभदिशा पश्चिम, आज कार्य सफलताका लागि
ॐ नमः शिवाय मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाइले प्रेमी÷प्रेमिकाको भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्नु उत्तम हुनेछ।
आज माता पिताको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ । काम गर्दा विभिन्न उपलब्धीहरू हासिल हुनेछन् । देख्दा सानातिना काम भए पनि आजको कामले पछि सम्म उपलब्धी हासिल हुनेछ । विशेष ठाउँमा तपाईंको निर्णयको कदर हुनेछ । बहस र वादविवादमा जीत हुनेछ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् । व्यापार व्यावसायमा मिश्रित सफलता हासिल हुनेछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग सेतो, शुभअङ्क ६, शुभदिशा दक्षिण, आज कार्य सफलताका लागि ॐ धन्वन्तरीदेवाय नमः मन्त्र ०८ पटक जप गर्नू शुभ हुनेछ। आज तपाईले मुद्दामामिला र झैझगडा बाट पर बस्नु शुभ हुनेछ।
आज तपाईका लागि मिश्रित समय छ । कुनै नयाँ समाचारले चिन्ता बढ्न सक्नेछ। नयाँ कामका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । विद्यार्थीका लागि आज सकारात्मक दिन नै रहने छ। तर आफ्नो क्षमतामा घट्दै गएको महसुस हुनेछ । बालबच्चाका लागि केहि धनराशि खर्च हुने सम्भावना छ ।े सृजनात्मक काममा सफलता पाइने छ । भोगविलासप्रति आशक्ति बढ्न सक्छ र आफुले भन
जस्तो नहुँदा मन विरक्तिन सक्छ। सचेत रहनु होला । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग आकासे, शुभअङ्क ९
शुभदिशा पूर्व, आज कार्य सफलताका लागि ॐ वाग्देव्यै नमः ०७ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाईले कुनैपनि काम गर्दा अहङ्कार नदेखाउनु शुभ हुनेछ।
मनमा किसिमकिसिमका बिचार हरु आउन सक्नेछन । मनलाई खराब काम गर्ने सोच तर्फ जान दिनु हुँदैन । विपरीतलिङ्गी साथीबाट मानसम्मानमा आघात पुग्न सक्छ । घरायसी खर्चमा बृद्धि हुनेछ । शरीरमा अल्छीपना र आलस्य जाग्नेछ । महत्वाकाङ्क्षी योजनामा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुनसक्छ । काममा अप्ठ्यारा र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । परिवारजनमा असमझदारी बढ्नेछ । गोपनीयता भङ्ग हुनाले हुन लागेको काम बिग्रन सक्नेछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग कलेजी, शुभअङ्क ४, शुभदिशा उत्तर, आज कार्य सफलताका लागि ॐ अष्टमातृकाभ्यो नमः मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाईले कुनै पनि चिजमा धेरै लोभ र मोह नदेखाउनु शुभ हुनेछ।
धार्मिक, सामाजिक काम वा परोपकारका क्षेत्रमा समय र धन खर्च गर्ने समय आएको छ । उपहार पुरस्कार समेत मिल्नेछ । व्यापारका व्यावसायका क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आज त्यसका लागि अनुकूल समय आएको छ । भाइबहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना छ । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रति आकर्षित भइनेछ । व्यावहारिक र सामाजिक जिम्मेबारी थपिनेछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग हरियो, शुभअङ्क ३, शुभदिशा पश्चिम, आज कार्य सफलताका लागि ॐ गं गणपतय नमः मन्त्र ०८ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाईले परोपकारी र सामाजिक काममा मन दिनु उत्तम हुनेछ।
आर्थिक दृष्टिले राम्रो दिन छ । नोकरी र व्यवसायिक क्षेत्रमा आज तपाईंको बोलीको कदर हुने दिन छ । तपाईंको बोली र व्यवहारप्रति विपरीतलिङ्गी साथीको आकर्षण बढ्नेछ । सुनचाँदी जस्ता धातुको कारोवारबाट लाभ मिल्नेछ । दिदीबहिनीको सहयोग पाइने छ । आर्थिक क्षेत्र सबल रहने छ भने स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक सङ्केत देखिने छ । व्यापारबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ । रमाइलो यात्रा हुनसक्छ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अवसर जुट्ने छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग सेतो, शुभअङ्क २, शुभदिशा दक्षिण, आज कार्य सफलताका लागि ॐ सिद्धिलक्ष्म्यै नमः मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाई फजुल खर्च बाट बच्नु आवश्यक छ।
मित्र र सहयोगीले तपाईंको सहायता गर्नेछन् । तपाईंका इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन् । कुनै फाईदाजनक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिने छ । लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ । घरायसी वातावरण तपाईंको पक्षमा रहनेछ । समग्रतामा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ । आज नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने दिन हो । शरीरमा उमङ्ग र स्फूर्ति प्राप्त हुनेछ । वैदेशिक यात्रा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्न आजको दिन अनुकूल छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग गुलाबी, शुभअङ्क १, शुभदिशा पूर्व। आज तपाईले कार्य सफलताका लागि ॐ अं अङ्गारकाय नमः मन्त्र १० पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाइले धेरै भावनामा डुब्ने काम नगर्नु उत्तम हुनेछ।
आजको दिन तपाईंको पक्षमा छैन । नचाहेको क्षेत्रमा खर्चको मात्रा बढ्नसक्छ। सकेसम्म खर्चमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । सुखी र विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत गर्न मन लालायित हुनेछ । मातापिता र अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धमा विवाद आउन सक्छ। यात्राको योग छ तर यात्राबाट फाइदा देखिंदैन । घुमघाम र मनोरञ्जनका क्रममा निराशा भोग्नु पर्छ । प्रशासनिक झैझमेला वा आरोप व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । प्रेम सम्बन्धमा तिक्तता आउने योग छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग बैजनी वा पहेंलो, शुभअङ्क ४, शुभदिशा उत्तर, आज कार्य सफलताका लागि ॐ बृं बृहस्पतये नमः मन्त्र १९ पटक जप गर्नु उत्तम हुनेछ।
दाजुभाइले तपाईंका कामधन्धामा सहयोग पुर्याउने दिन छ । साथीभाइको राम्रो सल्लाह र सद्भावना प्राप्त हुनेछ । अपूरा कार्य पूर्ण हुनेछन् । रोकिएका सरकारी काम पुरा गर्न राम्रो समय छ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । कार्यक्रममा प्रशंसित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि तथा पशुपालनमा कम र व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । गरेका कामबाट राम्रो लाभ हुनेछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग नीलो, शुभअङ्क ३, शुभदिशा पश्चिम, आज कार्य सफलताका लागि ॐ शं शनिश्चराय नमः मन्त्र २३ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाईले अनुशासन भंग हुने काम नगर्नुहोला ।
आज तपाईको सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । व्यस्त रहनु पर्ने दिन छ । प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने छ । प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्न कठिन हुनेछ । पेसा÷व्यवसायमा भनेजस्तै लाभ मिल्नेछ । मान्यजन एवं अभिभावकका इच्छापूर्तिका लागि समय दिनुपर्ने छ । मान्यजनको सद्भाव मिल्नाले आत्मबल तथा प्रतिष्ठा बृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । काम गर्नेहरूले अलि बढी थाकेको अनुभूति गर्ने दिन छ। खानपिनमा राम्रो ध्यान दिनुहोला। आज तपाईका लागि शुभरङ्ग कालो, शुभअङ्क २, शुभदिशा दक्षिण, आज कार्य सफलताका लागि ॐ कुलदेवताभ्यो नमः मन्त्र २३ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाईले अल्छीपना त्याग गर्नु उत्तम हुनेछ।
व्यस्त दिनचर्या हुनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। संयम र लगनशील भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु शुभ हुनेछ। खुसीको वातावरण बन्नसक्छ । सामाजिक र आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनसके शान्तिको अनुभूति हुनेछ । छरछिमेकी र आफन्तका बीचमा सानोतिनो विषयमा विवाद पर्ने योग छ । पेसाव्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्रमा सोचेजस्तो उपलब्धि देखिंदैन । प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नु पर्नेछ । धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठा मिल्नसक्छ । आज तपाईका लागि शुभ शुभरङ्ग गाढा पहेंलो वा केशरी, शुभअङ्क ९, शुभदिशा पूर्व, आज कार्य सफलताका लागि ॐ धर्मराजाय नमः मन्त्र १९ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज तपाईले सामाजिक र परोपकारी काममा केहि समय दिनु शुभ हुनेछ।
आज स्वास्थ्यमा अचानक गडबडी आउनाले दैनिक कामकाजमा असर पर्नसक्छ । तपाईले गर्नैपर्ने कुनै काम रोकिन सक्छ । आज कुनै पनि क्षेत्रमा धन लगानी गर्न र साक्षी÷जमानी बस्न राम्रो दिन छैन । अनाहकमा अरुले गरेका गल्तीको सजाय पनि आफैले भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । यात्रामा चोटपटकको भय पनि छ, बाटो काट्दा वा हातहतियारको प्रयोग गर्दा सचेत हुनुपर्छ । बोलीमा बिचार पुर्याउनुहोला नत्र साथीभाइ टाढिन सक्छन् । अनावश्यक विवादमा फँस्न सकिन्छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग नीलो,
शुभअङ्क ८, शुभदिशा उत्तर, आज कार्य सफलताका लागि ॐ मृत्युञ्जयाय नमःमन्त्र १० पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ। आज सट्टापट्टा र जोखिमपूर्ण काम मा हात नहाल्नु वेश हुनेछ।
आजको राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ १८ गते बुधवार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०४ तारिख,
वि.सं. २०७६ भदौ १८ गते मंगलबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०४ तारिख, भाद्र शुक्ल पक्ष षष्ठि तिथी। स्वाती नक्षत्र, चन्द्रमा तुला राशिमा। ब्रम्हा योग, कौलव करण। सुर्याेदय बिहान ०५ः४४ र सुर्यास्त साँझ ०६ ः२० मा हुनेछ। आज जन्म लिने वच्चाको राशि तुला हुन्छ।
आजको चाडपर्र्व सुर्य षष्ठि र भोली भक्तपुरमा मंगलकुण्ड मेला रहेको छ।
लाभ वेला बिहान ०५ ः५७ देखि ०७ ः१२ मिनेट सम्म, अमृत वेला बिहान ०७ ः१३ देखि ०८ ः४३ सम्म शुभ वेला दिउँसो १०ः१२ देखि ११ ः१३ सम्म रहेका छन।
काल वेला बिहान ०८ ः४४ देखि १० ः १४ सम्म र रोग वेला मध्यान्ह ११ः ४२ देखि ०१ ः १२ सम्म रहेका छन।
More in this category: « साप्ताहिक राशिफल - सन् २०१९ सेप्टेम्बर ०१ देखि ०७ सम्म	आजको राशिफल (बिहिबार र शुक्रबार)- ज्यो.पं. हरिप्रसाद भण्डारी »